Injini yedhiri, Marine Turbocharger, Compressor Yemhepo - Sino-Ocean
Imwe-yekumira masevhisi, akakosha ekuvimbwa
Tsigiro yeemail sinoocean@shippart.net
Fonera Tsigiro 0086- (0) 335-5913678
Diesel & jenareta rinovira
Pisitoni & pisitoni tsvimbo
Pisitoni tsvimbo yekuzadza bhokisi
Cylinder liner & kutonhora bhachi
Chinongedzo jongwe & Kutanga vharuvhu
Pombi yemafuta & Fuel pombi giya
Rotor Shaft Yakazara
Compressor & Inducer vhiri uye Nereza
Gasi labyrinth uye Kuisa chisimbiso gwenzi
Nozzle mhete uye Cover mhete
Air compressor yakakwana
Yakakwira kumanikidza kubvisa & Exhaust vharafu
Pisitoni & pisitoni mhete
Kubatanidza tsvimbo inotakura ganda
Vertical uye chinjikira mugodhi
Zvimwe zvekuchenesa zvikamu
Pump pemba zvikamu
Dzimwe hydraulic michina
Mhepo yemhepo inogadzirisa compressor
Mhepo yemhepo inogadzirisa
Mimwe michina yemumvura
Chishandiso uye zvishandiso
Qinhuangdao Sino-Ocean Marine Equipment & Machinery Co, Ltd.
Kubva 1995, Qin Huangdao Sino-Ocean Marine Equipment & Machinery Co, Ltd. yakagara yakazvipira kupa yakarongeka uye nehunyanzvi imwechete-yekumira sevhisi yegungwa. Izvozvi zvave kukura kuva bhizinesi rakazara rinounganidza zvikamu zvekuparadzira 'kugovera, kugadzirisa uye kugadzirisa, kugadzirisa chikepe, rutsigiro rwehunyanzvi uye kuvaka michina yekuvaka pamwe chete.
Plate Heat chinja
Kambani yedu yanga ichichengetedza hukama hwekudyidzana hwepedyo nemakambani makuru enjini uye mafekitori epasi rese, inozivikanwa nekutenga sosi yakavimbika, yakagadzikana mhando uye mutengo unonzwisisika.
Yedu kambani mutengesi wezvakakurumbira zvinogadzira 'marine spare zvikamu ne90% stock kuwanikwa pane kiyi driveline zvinhu. Iyi chaiyo mukana haingochengetedze nguva yakakosha chete asi inotipawo kumberi pane vakwikwidzi. Saizvozvowo mubhadharo wemitengo unobvumidza unobvumidza mamiriro ezvinhu anobatsira vatengi.
Chikamu chakakosha cheSino-ocean marine uzivi kupa mhando yepamusoro uye nekukurumidza mhinduro. Naizvozvo Sino-ocean marine yakanyatsogadzira network inoshanda ine mainjiniya emahara ane hunyanzvi, vatengesi veOEM, nzvimbo dzekuchengetera zvine hunyanzvi uye vatengi vanogutsikana.
Pedza vharafu & Valve giya
Plate kupisa exchanger
Bhaira spare zvikamu
Sewege kurapwa chirimwa
Kana iwe uchida mhinduro yemabhizimusi ... Isu tinowanikwa iwe
Isu tinopa mhinduro dzekuvandudza kufambira mberi. Chikwata chedu chehunyanzvi chinoshanda kuwedzera kuwedzera uye kudhura pamusika
Adress: Kwete. 7 Wenquanhu Road, QETDZ, Qinhuangdao, Hebei Province, China
Fona: 0086- (0) 335-5913626
SINO-OCEAN MARINE PULSE ANOGONESESA CHARG ...
STOCK LIST YEMAHARA NEWARTSILA PISTO ...
Rotor, Nut, Kuchengeta Mhete,